နေ့ကလေးထိန်းဌာနနှင့် NICU - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
+၆၆ (၀) ၂၇၁၁-၈၁၈၁
Samitivej ဟာ နို့စို့အရွယ်ကလေးများအတွက် မွေးကင်းစကလေးငယ်များစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ မိသားစုများအတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ပံ့ပိုးမှုတွေကို ပေးနေတာဟာဆိုရင် အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီး ရှည်ကြားလှတဲ့ သမိုင်းမှတ်တိုင်တွေ ထူခဲ့ပြီးပါပြီ။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာ ဆေးရုံကြီးဟာ မိခင်နှင့်ကလေးအတွက် သင့်လျှော်သောဆေးရုံအဖြစ် ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (UNICEF)၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ် (WHO)၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့မှ လက်မှတ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
Samitivej ဟာ နို့စို့အရွယ်ကလေးများအတွက် မွေးကင်းစကလေးငယ်များစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ မိသားစုများအတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ပံ့ပိုးမှုတွေကို ပေးနေတာဟာဆိုရင် အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီး ရှည်ကြားလှတဲ့ သမိုင်းမှတ်တိုင်တွေ ထူခဲ့ပြီးပါပြီ။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာ ဆေးရုံကြီးဟာ မိခင်နှင့်ကလေးအတွက် သင့်လျှော်သောဆေးရုံအဖြစ် ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (UNICEF)၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ် (WHO)၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့မှ လက်မှတ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ရွှေအဆင့် Sai Yak Rak ဆေးရုံ အဖြစ်အကဲဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ပစ္စည်းကိရိယာအဆောက်အဦးတွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ နှစ်မျိုးလုံးအတွက် အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ ရရှိခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဂုဏ်သတင်းကြီးလှတဲ့ JCI အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အပြင် ရရှိထားတဲ့လက်မှတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဆိုပေမယ့်လည်း ဆုတံဆိပ်တွေ၊ အများကအသိအမှတ်ပြုထားတာတွေထက် ပိုအရေးကြီးတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီကို လာရောက်ကုသတဲ့ မိခင်တွေနဲ့ မွေးကင်းစကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုနဲ့ ကျန်းမာရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့ကလေးထိန်းနှင့် မွေးကင်းစကလေး အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်ဟာ မွေးစကလေးငယ်များ၊ ပေါင်မပြည့်လမစေ့သော ကလေးငယ်များနဲ့ အသည်းအသန်အခြေအနေဖြစ်နေသော ကလေးများကို စောင့်ရှောက်ဖို့ တာဝန်ယူထားပါတယ်။ မွေးကင်းစကလေးတစ်ယောက်အတွက် ဒီပထမဆုံး နာရီအနည်းငယ်ဟာ ဘယ်လောက်တောင် အတိမ်းအစောင်းမခံဘူးလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ နားလည်ထားပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံပြည့်ဝတဲ့ သမားတော်ကြီးများ၊ သူနာပြုများနဲ့ ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများဟာ ကျွန်တော်တို့လူနာတွေအနေနဲ့ ဒီလိုအချိန်မှာ သူတို့လိုအပ်တဲ့ အထောက်အပံ့ကို သေချာပေါက်ရရှိစေဖို့ အထူးလေ့ကျင့်သင်ကြားထားကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက်စီအပေါ် ပံ့ပိုးကူညီမှုနဲ့အတူ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေနဲ့ ၂၄ နာရီ အထူးကြပ်မတ် ကုသပေးမှုကြောင့် အသက်ရှုခက်ခဲသော လက္ခဏာ (R.D.S.) ကဲ့သို့ ပြင်းထန်တဲ့ အခြေအနေမျိုးရှိတဲ့ လမစေ့သောကလေးငယ်တွေဟာ ကျန်းမာပျော်ရွင်တဲ့ ကလေးများအဖြစ် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်ပါတယ်။
မူမမှန်မှုများနှင့် မွေးကင်းစများအား ကုသပေးခြင်း
ဤဆေးရုံကြီးတွင်မွေးဖွားသော မွေးစကလေးငယ်များနှင့် အခြားဆေးရုံများမှ လွှဲလိုက်သော ကလေးငယ်များကို ပြုစုကုသပေးခြင်း
အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီ ပိုးကာကွယ်ဆေး၊ BCG စီစဉ်ပေးခြင်း
မွေးဖွားပြီးနောက် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ ပါဝင်လာသော မွေးစကလေးငယ်များကို ပြုစုကုသပေးခြင်း
လမစေ့သောမွေးစကလေးငယ်များနှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်နေသော မွေးစကလေးများကို ကုသပေးခြင်း
မွေးကင်းစကလေးတစ်ယောက်လျှင် သူနာပြုတစ်ဦးကျဖြင့် တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီပတ်လုံး
နေ့အချိန်တွင် တစ်လျှောက်လုံး ကလေးငယ်ထံ လာရောက်လည်ပတ်ခွင့်ပေးခြင်းဖြင့် မိဘများနှင့် ကလေးငယ်အကြား ရင်းနှီးမှုမြှင့်တင်ပေးခြင်း
သားဦးမိခင်အသစ်စက်စက်များကို မိခင်နို့တိုက်ကျွေးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အကြံဉာဏ်များပေးခြင်း
ပိုးဝင်မှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးသည့်အနေဖြင့် ဧည့်သည်များကို သီးခြားအခန်းတစ်ခန်းမှ ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှတင့် မွေးကင်းစကလေးငယ်ကို ကြည့်ခွင့်ပေးသည့် Look@My Baby စနစ်
မွေးကင်းစကလေးငယ်များအတွက် ၂၄ နာရီ အထူးကြပ်မတ်ကုသရန် အထူးကု NICU
မိခင်များကို မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ဆေးရုံကြီးမှ အထူးကုထံသို့ အွန်လိုင်းမှတဆင့်ဆက်သွယ်ပြီး ကလေးစောင့်ရှောက်မှု အကြံဉာဏ်များ အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီရှိစေနိုင်သည့် ကလေးငယ် အိမ်တွင်းစောင့်ရှောက်ရေး ဝန်ဆောင်မှု
မွေးစကလေးများ သွေးနီဥပျက်ဆီးသည့်ရောဂါ (hemolytic disease) ကို ကုသရန်အတွက် ထိရောက်သည့် ပစ္စည်းကိရိယာများ
+၆၆ (၀) ၃၇၈-၉၀၀၀
Sira Nanthapisal, M.D.
Tanya Leelasiriwong, M.D.
Professor Suroj Supavekin, M.D.